YBS ပေါ်မှာ အသက်အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက် ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားခံလိုက်ရတဲ့ ကိုယ့်တွေ့ဖြစ်ရပ် by popolay.com
YBS ပေါ်မှာ အသက်အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက် ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားခံလိုက်ရတဲ့ ကိုယ့်တွေ့ဖြစ်ရပ်
13 Jun 2018 3,933 Views
ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့က YBS ယာဉ်လိုင်းအမှတ် ၈၃ ကို စီနင်းလိုက်ပါခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ခရီးသည်အပြည့်ပါတဲ့ ယာဉ်ပေါ်မှာ အသက်အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်ပြီး ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လို့ ကာယကံရှင် အမျိုးသမီးက သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံများနဲ့တစ်ကွ ရေးသားခဲ့ပြီး ပြန်လည်မျှဝေသူ၊ ဒေါသထွက် ဝေဖန်သူတွေ များပြားခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ ရဲတပ်ဖွဲဝင်တွေကလည်း နေရာမလပ် အချိန်မနား လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြပေမယ့် ပြည်သူတွေ ကျင်လည်ကျက်စားတဲ့ နေရာတွေမှာ ခန့်မှန်းလို့မရတဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ မိုက်ကြေးခွဲ၊ စော်ကားရန်ပြုနေတဲ့ ဒုစရိုက်မှာ ပျော်မွေ့သူတွေကလည်း စိမ့်ဝင်နေလျှက် လစ်ရင်လစ်သလို ရန်ပြုစော်ကားနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ကာယကံရှင်မိန်းကလေး ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ပျက်မျိုးဟာ ပတ်ဝန်းကျင်က ပြည်သူအချင်ချင်း တာဝန်သိစိတ်နဲ့ ပူးပေါင်းဖြေရှင်းမှသာ ဒီလိုရိုင်းစိုင်းပြီး လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို မထီမဲ့မြင်ပြုသူတွေကို ပပျောက်စေမှာသာဖြစ်ပါတယ်။
May Phoo Ngone Tun အကောင့်ပိုင်ရှင် မိန်းကလေးက ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ အဖြစ်ပျက်တွေကို မူရင်းအတိုင်း ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ယ​နေ့ YBS ၈၃ ​ပေါ်မှ ခြိမ်း​ခြောက်​ခံရ​သောအဖြစ်​အပျက်​ ( 4:30 - 5:00 pm ခန့်)
ဒီ​နေ့ ည​နေ 4:30 ​လောက်​မှာ ရှစ်​မိုင်​( Junction 8 ) မှတ်​တိုင်​​က​နေ YBS 83 စီးပါတယ်​။ ကား​ပေါ်​ရောက်​​​တော့ ထိုင်​ခုံနှစ်​​နေရာရှိပါတယ်​။
တစ်​​နေရာက နောက်​ဆုံးတန်းရဲ့​အ​ရှေ့ ဘယ်​ဘက်ခြမ်းက လူသွားလမ်း ကပ်​ရပ်​​နေရာပါ။ ​နောက်​တစ်​​နေရာက ​ ​​နောက်​ဆုံးတန်း(၅​ယောက်​တန်း)က အလယ်​​နေရာ။ ​နောက်​ဆုံးတန်းမှာ ​ယောက်​ကျား​လေး​တွေချည်းပဲမို့ ​နောက်​ဆုံးတန်းရဲ့ အ​ရှေ့ခုံမှာ ထိုင်​ဖို့ကြည့်လိုက်​​တော့ ​နောက်​ဆုံးတန်းမှာ ထိုင်​​နေတဲ့လူက အဲဒီခုံရဲ့​ခေါင်းမှီတဲ့​နေရာကို ​ခြေ​ထောက်​တင်​ထားပါတယ်​။
အဲဒါနဲ့ ​ကျွန်​မထိုင်​လိုက်​ရင်​ ​ခေါင်းနဲ့ထိ​နေမှာစိုးလို့​ ခြေ​ထောက်​​ဖယ်​​ပေးဖို့ ​​ကောင်းကောင်းမွန်​မွန်​​ပြောပါတယ်​။ ကျွန်​မကို မကြည်​ကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီး ​ခြေ​ထောက်​ကို​ အောက်​ချလိုက်​ပါတယ်​။ ကျွန်​မအဲဒီခုံမှာထိုင်​ပြီး ခဏ​နေ​တော့ ကွမ်းတံ​တွေး တဗျစ်​ဗျစ်​​ထွေးသံကြားပါတယ်​ (အိတ်​ထဲ​ထွေးသလား ဘယ်​​ထွေးသလဲ​တော့မမြင်​ရ​တော့မသိပါဘူး)။ အဲဒါနဲ့ ​ဘေးက အန်​တီကြီးက ကျွန်​မ​ခေါင်းကို ကွမ်းတံ​တွေးစင်​မှာဆိုးလို့လားမသိ ကျွန်​မကို အ​ရှေ့နည်းနည်းဆွဲလိုက်​ပါတယ်​။
ခဏ​နေ​တော့ ကျွန်​မလှည့်ကြည့်တော့ ​ခြေ​ထောက်​ကို နဂိုပုံစံအတိုင်း(ကျွန်​မ​ခေါင်းနားကို)ပြန်​တင်​ထားပါတယ်​။ ကျွန်​မလဲ​ ​"ခြေ​ထောက်​ကိုဖယ်​​ပေးပါ" လို့​ပြော​တော့ ဘာမှမ​ပြောပဲ ကျွန်​မကို​သေချာကြည့်နေပါတယ်​။ ကျွန်​မလဲစိတ်​မရှည်​​တော့လို့​ -
"​ပြော​နေတာမကြားဘူးလား၊ မြန်​မာစကား နားမလည်​ဘူးလား" လို့​ပြော​တော့ " ဒီကားကိုမင်းပိုင်​လို့လား ငါ့ဟာငါ​​နေချင်​သလို​နေမယ်​တဲ့ " "အသက်​ရှည်​ချင်​ရင်​​အေး​ဆေး​နေ" " အသက်​မ​သေချင်​ရင်​​အေး​ဆေး​နေ" " လှိုင်​သာယာသား​တွေ ဘာမှတ်​​နေလဲ" လို့​ ကျွန်​မကို ခြိမ်း​ခြောက်​ပါတယ်​။
ကျွန်​မလဲ စိတ်​တိုပြီးဘာလုပ်​ရင်​​ကောင်းမလဲ စဉ်းစား​နေတုန်း ​ဘေးကအန်​တီကြီးက "သမီးရယ်​ ​ပြောမ​နေပါနဲ့​တော့ သူက ​0 level ​လေ ။ အ​ရှေ့ကခုံမှာပဲ လွတ်​ရင်​​ရွှေ့ထိုင်​လိုက်​" လို့ ​ပြောလို့ ကျွန်​မလဲ ဘာမှထပ်​မ​ပြောပဲ ဒီတိုင်းဆက်​​ထိုင်​​နေပါတယ်​။
ခဏ​နေ​တော့ ​ရှေ့တစ်​ခုံ​ကျော်​​လောက်​ဆင်းသွားလို့ အဲဒီမှာ​ပြောင်းထိုင်​လိုက်​ပါတယ်​ (လူသွားလမ်းကပ်​ရပ်​ပါပဲ)။ အဲလိုပဲလိုက်​လာခဲ့တာ ဗိုလ်​ချုပ်​မှတ်​တိုင်​နား​ရောက်​​တော့ ကျွန်​မ​ခေါင်းကို လူတစ်​​ယောက်​ရိုက်​လိုက်​လို့ ကြည့်လိုက်​​တော့ ခုနက အဲဒီလူပါပဲ။ တမင်​ရိုက်​ပြီး ကားတံခါးနားကိုသွားပါတယ်​။ ကျွန်​မလဲ "ကို security ​ရေ ကျွန်​မ​ခေါင်းကို ရိုက်​သွားလို့ပါလို့​ အော်​​တော့ အဲဒီလူကလှည့်ကြည့်ပြီး ဘယ်​မှာရိုက်​လို့လဲ လို့​ပြော​တော့ ခင်​ဗျား ကျွန်​မ​ခေါင်းကို ရိုက်​သွားတယ်​​လေ မဟုတ်​ဘူးလားလို့​မေး​တော့ ကျွန်​မကို​သေချာကြည့်ပြီး ဟိုဘက်​လှည့်သွားပါတယ်​။ ဗိုလ်​ချုပ်​မှတ်​တိုင်​မှာ ဆင်းသွားပါတယ်​။ (security အစ်​ကိုကြီးက​တော့ အ​ရှေ့ကဖြစ်​တဲ့ပြသနာကို မသိ​တော့ မ​တော်​တဆဖြစ်​တယ်​ ထင်​သွားပါတယ်​)။
Bus ​ပေါ်မှာ ထိုင်​ခုံအပြည့် လူပါပါတယ်​ ။ မတ်​တပ်​​တောင်​ နည်းနည်းပါ​သေးတယ်​။ ဒီ​လောက်​လူများတဲ့ ​နေရာမှာ​တောင်​ အသက်​အန္တရာယ်​ကို ခြိမ်းခြောက်​ရဲတဲ့အ​ခြေအ​နေ ဖြစ်​​နေပြီလား..? သူတို့ကအဲလိုခြိမ်း​ခြောက်​ရင်​​ရော မိန်းက​လေးမို့​ကြောက်​ပြီး ငြိမ်​​နေရ​တော့မှာလား..? ကိုယ်​မှန်​​နေရင်​​တောင်​ မိန်းက​လေးမို့​ကြောက်​ပြီး သူတို့​ပြောသလို​ နေလိုက်​ရ​တော့မှာလား..? အဲဒီလိုသာဆို ဒီလိုလူ​တွေက ပိုပြီး​တော့​တောင်​ အတင့်ရဲလာကြဦးမှာမဟုတ်​လား။
အဲဒီလူဆင်းခါနီး ဓာတ်​ပုံရိုက်​ထားဖို့သတိရလို့ ရိုက်​လိုက်​​ပေမယ့် မျက်​နှာမမြင်​ရဘူး။ သူကိုရိုက်​မှန်းသိလို့ တမင်​ကွယ်​လိုက်​တာ။
ကိုယ့်ရှေ့မှာ မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​ အဲလိုဖြစ်​​နေရင်​ အတတ်​နိုင်​ဆုံး ရိုင်းပင်းကူညီ​ပေးကြဖို့လဲ ​မေတ္တာရပ်​ခံချင်​ပါတယ်​။
ကားဂိတ်​ထိလိုက်​ပြီး cctv record ရမလားလို့သွား​မေး​ပါတယ်​ ဒီတိုင်း​တော့ cctv ကို ပြန်​ပြခွင့်မရှိဘူး ရဲတိုင်​ပြီး ရဲပါလာရင်​​တော့ သူတို့​ ​ပေးလိုက်​လို့ရတယ်။ ကားနံပါတ်​နဲ့ အချိန်​မှတ်​ထားပြီး အချိန်​မ​ရွေးလာယူလို့ရတယ်​​ ပြောပါတယ်​။ security အစ်​ကိုကြီးကလဲ စဖြစ်​ကတည်းက ​လာပြောရင်​ သူတို့တစ်​ခုခုလုပ်​​ပေးလို့ရ​ကြောင်းတော့​ ပြောပါတယ်​။
မိန်းက​လေးများ အဲလိုလူ​တွေကို သတိထားကြဖို့ ၊ ​​ယောက်ကျား​လေးများ ဖြစ်​နိုင်​ရင်​ ကူညီ​ပေးကြဖို့​ ပြောချင်​တာပါ (​ယောက်ကျား​လေးအချင်းချင်းဆို စကားဝင်​​ပြောလိုက်​ရင်​ကို ရှိန်​ပါတယ်​)
ဒီအကြောင်းအရာကို ဖတ်ပြီးတဲ့အဆုံးမှာ မိတ်ဆွေဆိုရင်ရော ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ အကြံပြုချက် ကွန်မန့်လေး တစ်ကြောင်းတစ်လေက ပြည်သူတွေအားလုံးကို အကျိုးပြုစေနိုင်မှာမို့ မန့်ခဲကြပါဦးလို့ မေတ္တာရပ်ပါတယ်။